Falastiiniyiinta oo dhigaya dibad bax ka dhan ah go'aanka Trump ee Qudus - BBC News Somali
Dadkan ayaa ka careysan go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
Israa'iil ayaa boqollaal ciidamo dheeraad ah geysay Daanta Galbeed, ayadoo laga cabsi qabo in xiisadda ay ka sii darto.
Go'aanka Trump oo isbedel wayn ku ah siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee tobannaanka sano soo jirtay waxaa laga bixiyay jawaabo caro leh oo caalamka oo dhan ka timi.
Waxaa jirto cabsi laga qabo in shaacintan ay soo celiso qalalaasii xumaa ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'iil. Ururka Xamaas ayaa ku dhawaaqay kacdoon cusub.
Wuxuu sheegay Mr Trump in go'aankaas aan loola jeedin in Maraykanku uu faraha ka qaaday sidii ay uga go'nayd in nabad waarta laga gaaro bariga dhexe.
Falastiiniyiinta ku nool koofurta marinka Qasa oo hadalkaas aad uga caraysan ayaa gubay sawirka Mr Trump, kan ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo calanka Yuhuudda.
Image caption Calanka Israa'iil oo gidaar lagu shiday
Weerar lagu qaaday safaarada Isra'iil ee dalka Urdun